Vaovao - Toetoetran'ny lafaoro misy savony mahavonjy angovo sy tontolo iainana
Ny lafaoro mitsivalana dia manondro fitaovana fanaovana kajy sokay hamoaka ny clinker tsy tapaka ao amin'ny faritra ambany amin'ny sakafo ambony. Izy io dia misy vatan'ny lafaoro mitsivalana, manampy sy mamoaka fitaovana sy fitaovana fanadiovana. Ny lafaoro mitsivalana dia azo zaraina amin'ireto karazana efatra manaraka ireto araka ny lasantsy: lafaoro mitsivalana lafaoro, lafaoro mitsivalana arina, lafaoro mitsivalana solika ary lafaoro mitsivalana entona. Ny tombony amin'ny lafaoro sokay mitsangana dia ny fampiasam-bola kely kokoa, ny habaky ny gorodona, ny fahombiazan'ny avo, ny fanjifana solika ambany ary ny fandidiana mora.
Ny sokay navoakan'ny lafaoro makirana mamonjy angovo sy tia tontolo iainana dia tsy hoe avo lenta ihany, fa tena tsara ihany koa manao fanamiana sy miorina, miaraka amina asa sokay avo sy atin'ny kalsioma tsara. Androany isika dia hianatra momba ny toetoetran'ny lafaoro misy savony mahavonjy angovo sy tia tontolo iainana.
1) Satria mihodina tsy miova amin'ny lafaoro sokay ny fitaovana, avo sy tsara ny fihazakazahana, izay manome antoka ho an'ireo orinasa toy ny orinasa vy hanitatra ny ambaratonga sy hampihena ny vidin'ny famokarana.
2) Haavo avo lenta amin'ny automatisation, rafitra fanaraha-maso lavitra, vitsy ny olona afaka miasa ny tsipika iray manontolo.
3) Kalitaon'ny vokatra fanamiana.
4) Ny lafaoro mitsivalana mitsangana dia fikajiana mivelatra, dingana famokarana haitao avo lenta, fanjifana angovo somary ambany kokoa noho ny rafitry ny lafaoro sokay taloha, ary afaka mampiasa gazy lafaoro famafazana toy ny solika izay miaro kokoa ny tontolo iainana.
5) Ny rafitra mandeha ho azy sy ny tanana dia samy manana fitaovana. Afa-tsy ny fiasan'ny tanana amin'ny boaty fandidiana eo an-toerana, izy rehetra dia azo fehezin'ny fiasan'ny solosaina ao amin'ny efitrano fanaraha-maso afovoany.
6) Ny tahirin-kevitry ny zavamaneno rehetra (toy ny fandrefesana, ny metatra mikoriana, ny fitaovana momba ny mari-pana) dia aseho amin'ny solosaina ary azon'ny mpanonta atao pirinty.
7) Fandefasana modely mavesatra siemens manan-tsaina sy milanja ary onitra.
8) Ny mari-pahaizana momba ny sokay vita amin'ny sokay, ny mahay ary ny fitaovana enti-manana hafa.
9) Ny rafitra mandeha ho azy sy ny tanana dia samy manana fitaovana. Afa-tsy ny fiasan'ny tanana amin'ny boaty fandidiana eo an-toerana, izy rehetra dia azo fehezin'ny fiasan'ny solosaina ao amin'ny efitrano fanaraha-maso afovoany.